(Kugcine ukubuyekezwa On: 21/08/2020)
Impophoma yaseMarmore ifinyelela 165 m ngobude kunabo bonke 3 ekuphakameni kwe 85 m. Ngakho-ke, impophoma emide kakhulu eyenziwe ngabantu eYurophu i-Marmore waterfall. Le mpophoma ebabazekayo Itholakala enhliziyweni yesifunda i-Umbria futhi yadalwa ngamaRoma asendulo.
Amatshe amhlophe anemibala emhlophe nezimpophoma ezinamatshe amaningi afinyeleleka kalula ngesitimela sisuka eRoma Termini siya edolobheni laseTerni. Izitimela eziya eTerni zivame kakhulu futhi isitimela sisuka njalo ngehora. Lapho ufika esiteshini sesitimela saseTerni, kunamabhasi angakuhambisa ekuphanjeni kwamanzi. Kunemali yokungena ezimpophomeni.
Nokho, ngethikithi lesitimela laseTrenitalia uthola isaphulelo futhi lokho kungenye inzuzo yokuhamba ngesitimela esiya eMarmore izimpophoma:)
Impophoma eyaziwa kakhulu futhi ethwebula izithombe e-Italiya iyimpophoma yamadolobhana edolobhaneni laseDi Saturnia. Itholakala eTuscany, Iziphethu ezishisayo zeSaturnia zingenye enhle kakhulu iziphethu zemvelo ezishisayo eYurophu. Leli dolobhana eliyikhaya lesiphethu esudumile esidumile kusukela ezikhathini zamaRoma. Iholide lakho le-Tuscany ngeke liphele ngaphandle kosuku ku-izimpophoma ezishisayo zikaSaturnia. Iziphethu zinhle ngokuphumula ngemuva kokuvakashela ezinye izimpophoma ezinhle eziseduze, Isigidi kanye nezimpophoma zaseGorello.
Kungcono ukuvakashela izimpophoma zaseRhine ehlobo ngemuva kokuncibilika kweqhwa futhi konke okuzungezile kuluhlaza okotshani. Izimpophoma zaseRhine yilezi 50 ukuhamba ngesitimela ukusuka eZurich futhi empeleni kuneziteshi ezimbili zezitimela kuzinhlangothi zombili zezimpophoma. Ngakho-ke, Kulula kakhulu ukuya izimpophoma ezimangalisayo zombili imindeni futhi abahambi solo.
Uma uthanda ngokweqile futhi ufuna ukubukwa okuhle ikakhulukazi, uzokuthanda ngokuphelele ukuqubuka kwamanzi eStuibenfall eTirol. Amabhuloho okumiswa nemibhoshongo evunguza emoyeni enza ukuhamba kule mpophoma emangalisayo kube mnandi futhi kujabulise. Ukuphaphama kweTrisol okude kakhulu nokukhulu kuno-2.4km, ukuze ukwazi ukuyihlola ngokuhamba kosuku lokuya nokubuya. I izintaba umzila uqala futhi aqede endaweni yokupaka edolobheni Umhausen.
Itholakala e-Austria ipaki yezwe ngobukhulu, Ipaki Yezwe Eliphezulu YaseTauern, impophoma yeKrimml iyimpophoma enamanzi amathathu, ekufinyeleleni 1490 m ekuphakameni futhi 380 m phezulu. Amahlathi asendulo, izilwane, ukhozi olubomvu nezinkozi zegolide kumane nje kuyizakhamizi ezimbalwa zaleli paki ezingase ziwele nawe endleleni eya kwenye impophoma emangalisayo eYurophu. Uma ungumthandi wokukhempa futhi onamava wokuhambahamba, le paki kanye nezimpophoma zaseKrimml zizoba yinto engalibaleki ezindaweni eziphakeme zase-Austrian.
Iphakathi esigodini esiluhlaza okotshani, izimpophoma zeGavarnie eziphakemeyo eFrance 422 amamitha aphezulu futhi athandwa kakhulu phakathi kwezivakashi. Ngokubona kwe-Hautes Pyrenees, i-Gavarnie waterfall iwuthando futhi ilungele abagibeli abanzima abafisa ukuhlola nokunqoba i Ama-French Pyrenees. Impophoma ye-Gavarnie kuphela 40 imizuzu emincane ukusuka edolobhaneni laseGavarnie.
I-Europe yindawo yokuphupha yabahambi abahamba bodwa nemindeni. Kulula kakhulu ukuhamba kulo lonke iYurophu futhi zonke izimpophoma ezinhle ezikuluhlu lwethu zitholakala kakhulu ngesitimela noma ngebhasi, ngoba uhambo losuku noma ukumisa amatende, kubahambi abanolwazi noma abaqalayo abazizwa bemangele futhi bephupha ukuthola okuhle kunhlobo yemvelo yaseYurophu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “7 Izimpophoma Ezinhle Kunazo Zonke eYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/most-beificent-waterfalls-europe/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)